February 27, 2020 - MM Live News
February 27, 2020 MM Live News
(၈)တန်းကျောင်းသူ အသက် 15 နှစ်‌ဝန်းကျင်အရွယ် ညီမလေး ပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးပါဦးရှင့်… ( 27.2.2020 ) စစ်ကိုင်းမြို့ ထားဝယ်ဈေးရပ်ကွက်မှ မသဉ္ဇာကို (၈)တန်းကျောင်းသူလေး ဖြစ်ပါတယ်……။ အသက် 15 နှစ်‌ဝန်းကျင်အရွယ် ညီမလေးပျောက်နေပါဖြင့်တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးပါဦးရှင့် ……။ မိသားစုမှ စိတ်ပူနေပါတယ် ညီမ‌လေးရေ…….။ ဆိုင်ကအရောင်းဝန်ထမ်းရဲ့ ညီမလေး ၈တန်းစာမေးပွဲဖြေနေလို့ ကူညီပြီးရှယ်ပေးကြပါအုံးရှင့်……။ ကျေးဇူးပြု၍ shareပေးကြပါအုံးနော်……..။ ဆက်သွယ်ရန် / 09795591744 / 09695303464 / 092022294 unicode (၈)တနျးကြောငျးသူ အသကျ 15 နှဈ‌ဝနျးကငျြအရှယျ ညီမလေး ပြောကျဆုံးနပေါသဖွငျ့ တှရှေိ့ပါက အကွောငျးကွားပေးပါဦးရှငျ့… ( 27.2.2020 ) စဈကိုငျးမွို့ ထားဝယျဈေးရပျကှကျမှ မသဉ်ဇာကို […]
နေရပ်တောင်မေးမြန်းမရသည့် လူနာ နှင့် ငွေသိန်း(၂၀၀) နေရပ်တောင်မေးမြန်းမရသည့် လူနာထံပါလာသည့် ငွေသိန်း(၂၀၀)ကို မရရအောင်ဆက်သွယ်ပြီး ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့လေး မုဒုံ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး လူနာတင်ယာဉ်ကွန်ယက်မှ အားမာန်သစ် တော်ကူးအဖွဲ့မှ Accident လူနာတစ်ဦးထံမှ ငွေကျပ် သိန်း ၂၀၀ ဝန်းကျင်အား သိမ်းဆည်းပြီး ပိုင်ရှင်များထံ စနစ်တကျအပ်နှံပေးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလူနာသည် သတိလစ်ပြီး နေရပ်တောင်မေးမြန်းမရသည့် လူနာဖြစ်ပါသည်။ ပရဟိတစိတ်ဖြင့်ရိုးသားသောအသင်းဖွဲ့များကြောင့် ငွေကျပ် သိန်း ၂၀၀ ကျော် အားမိသားစုများထံ ပြန်လည်အပ်နှံ နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Credit အမွှာညီနောင် Unicode နရေပျတောငျမေးမွနျးမရသညျ့ လူနာ နှငျ့ ငှသေိနျး(၂၀၀) နရေပျတောငျမေးမွနျးမရသညျ့ လူနာထံပါလာသညျ့ ငှသေိနျး(၂၀၀)ကို မရရအောငျဆကျသှယျပွီး ပွနျပေးခဲ့တဲ့ ပရဟိတအဖှဲ့လေး မုဒုံ အရေးပျေါကယျဆယျရေး လူနာတငျယာဉျကှနျယကျမှ အားမာနျသဈ […]
လူတွေနဲ့ အတူနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ အတူနေလာခဲ့ကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ ဆိုရင် ခွေးလေးတွေက အဓိကပဲလို့ ပြောရလောက်အောင်ပါပဲ ။ ခွေးလေးတွေဟာ လူတွေအပေါ်အသိတတ်ဆုံး ၊အကူညီဆုံး တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြပေမဲ့လည်း လူတွေက စွန့်ကျဲမှ စားသောက်ရတဲ့ အကောင်လေးတွေပါ ။ ထို့အတူပါပဲ ယခုလိုလမ်းဘေးခွေးတွေတိုးပွားလာရခြင်းကတော့ လူတွေကြောင့်ပါပဲ ။ လူတွေဟာ ခွေးလေးတွေကို မွေးမြူထားပြီး နောက်ပိုင်းမကျွေးမွေးနိုင်တော့လို့ လမ်းဘေးတွေမှာဖြစ်သလိုပစ်ထားခဲ့ကြလို့ ယခုလိုလမ်းဘေးခွေးလေးတွေ ပွားများလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် လမ်းဘေးခွေးတွေ လျော့ကျသွားဖို့ အဆိပ်တွေကျွေးခြင်း ၊ သတ်ပစ်ခြင်း တို့လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်း ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ထင်ထားတာထက်ကို ဆိုးရွားလွန်းလှပါတယ် ။ အစားအစာတွေငတ်မွတ်နေတဲ့လမ်းဘေးခွေးတွေကို သံချောင်းတွေ ၊ အပ်ချောင်းတွေ ထိုးစိုက်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကို ပစ်ကျွေးခဲ့လို့ပါပဲ ထို့ကြောင့် ငတ်မွတ်နေတဲ့ ခွေးလေးတွေကပေါင်မုန့်တွေကိုစားသောက်ရင်း အခန့်မသင့် သံချောင်းလေးတွေမျိုးချမိပြီး ၊ဘားမှမသိလိုက်ဘဲ […]
​ဖောက်​ပြန်​တတ်​တဲ့သူကို ပစ်​ထားပြီး ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ ပိုလှ​အောင်​​နေပါ.. ဒီစာ​​စောင်​​လေးကို ​ယောကျာ်း မိန်းမ မည်​သူမဆို ဖတ်​​ပေးပါ။ အထူးသဖြင့်​ အိမ်​​ထောင်​သည်​ ​မိန်းမ များအား အကြံ​ပေးစာအရ ​ရေးသားထားပါတယ်​ ။ စာရှည်​ရင်​ သည်းခံပြီး ဆုံး​အောင်​သာ ဖတ်​​ပေးဖို့ စာ​ရေးပြုစုသူ သိန်း​မောင်​​မောင်​ မှ အကြံပြု ​မေတ္တာရပ်​ခံပါရ​စေ… ​ဖောက်​ပြန်​တတ်​တဲ့ သတင်း​တွေ ချည်း ကြားကြား​နေရလို့​လေ… ချစ်​သူ အိမ်​​ထောင်​ဖက်​ အခြားတစ်​​ယောက်​နဲ့ ​ဖောက်​ပြန်​​နေပြီဆိုရင်​ အသဲနာပြီ ​ဒေါသ​တွေထွက်​ အပြစ်​​တွေ အပြန်​အလှန်​တင်​ ရန်​ဖြစ်​ အအိပ်​ပျက်​ အစားပျက်​ပြီး… ရုပ်​ပျက်​ ဆင်းပျက်​နဲ့ ​သေချင်​​လောက်​​အောင်​ စိတ်​ဆင်းရဲ့ ကိုယ်​ဆင်းရဲ ဖြစ်​ကြရပါတယ်​..။ အချို့ဆို ဘ၀ပျက်​ အနာဂတ်​​မေ့တဲ့ထိ ဖြစ်​ကြတာ ​တွေရတယ်​။ကျွန်​​နော်​အ​နေနဲ့ အဲ့ဒီလို့ မဖြစ်​ကြ​စေချင်​ပါဘူး။ အ​ရေးကြီးတာက​တော့ ​ဖောက်​ပြန်​ခံရတဲ့အခါ […]
နောက်အိမ်ထောင် -နှင့်​– ​ဖောက်​ပြန်​ခြင်း ​အစ်​မကြီး တစ်​​ယောက်​ရဲ့ ​တောင်းဆိုချက်​ပါတင်​လိုက်​ပါပြီ နောက်အိမ်ထောင် ပြု တဲ့ ဖခင် မိခင် တိုင်း လိုလို အများစု ဘဝဇာတ်သိမ်း မကောင်းကြပါဘူး။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမေ့ အဖေ့ ကို အသနားပိုပြီး သားသမီးများက ပို ချစ်ကြတယ်။ အသိစိတ်က အဖေ အမေ ဆိုပေမယ့် မသိစိတ်ကကြည်ညိုလို့မရတဲ့ ဖခင် မိခင် ဖြစ်နေတာပါ။ အသိစိတ်က သွေးသား တော်စပ်ပေမယ့် မသိစိတ်က သူစိမ်း တစ်ယောက်လိုဘာ ခံစားချက်မှမရှိသလောက် ဖြစ်နေတော့တာပါ။ အသက် အရွယ် ကြီး လာတာနဲ့ အမျှ သား ရင်း သမီး ရင်း ဆိုတာ အနား မှာ ကပ်ကြမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုပစ်ထားခဲ့တဲ့ […]
မှေးနတေဲ့ ငါးကငျကို ဈေးကွီးပေးပွီးတော့စားနတေဲ့ နောကျကှယျက မစားသငျ့သော အကွောငျးရငျး
ကျွန်တော်တို့ ဇလားပီးယားငါးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ် ။ မွှေးနေတဲ့ ငါးကင်ကို ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ကိုစားတယ် ၊ စားလို့လဲကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတော့ မစဉ်းစားမိကြဘူး ။ ဇလားဗီးယားငါးတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ကျယ်ပြန့်စွာမွေးမြူပြီးစားသုံးနေကြတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ကင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုချက်စားစား စားကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တင့်တာကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဇလားဗီးယားငါးတွေဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အလွန်အကျွံ မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) မွေးမြူရေးငါးတွေဖြစ်တယ် ဇလားဗီးယားငါးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ငါးကန်ထဲမှာ ကျပ်သိပ်နေအောင် မွေးမြူထားတဲ့ မွေးမြူရေးငါးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငါးတွေဟာ အစားမရွေးတာကြောင့် ဘာကျွေးကျွေးစားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မစင်တွေနဲ့ထမင်းသိုးတွေ ဟင်းသိုးတွေနဲ့မွေးမြူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် စားလိုက်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ […]
မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျ ရှမွေယာကှနျဒိုရှိ လငျးနို့ အကောငျ (၁)သနျးခနျ့ နထေိုငျသညျ့ လငျးနို့သိုကျအား ရှငျးလငျးရနျ
February 27, 2020 February 27, 2020 MM Live News
ရွှေမြယာကွန်ဒိုရှိ လင်းနို့ အကောင် (၁)သန်းခန့် နေထိုင်သည့် လင်းနို့သိုက်အား ရှင်းလင်းရန် ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရွှေမြယာကွန်ဒို၌ ရှိနေသောလင်းနို့ (ခန့်မှန်း အကောင် တစ်သန်း) ခန့်အား (၂၇. ၂. ၂၀၂၀) တွင်ရှင်းလင်းရန်အတွက် ဖို့မြေရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တောင်ညွန့်ကြီးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှဆရာ ဆရာမများနှင့် မြို့နယ် NLD ဥက္ကဌတို့မှ သွားရောက်ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ လင်းနို့များမှာ ညနေ ၆:၀၀ နာရီဝန်ကျင်ခန့်တွင်ယင်းနေရာမှစတင်ပျံသန်း၍ ရွှေတိဂုံဘုရားဝန်ကျင်ရှိ ပြည်သူ့ရင်ပြင် နားသစ်တောအုပ်များ၊ သန်လျင်တံတားဝန်ကျင်ရှိ သစ်တောအုပ်များသို့ ပိုးကောင်ငယ်များအား ဖမ်းယူစားသောက် အစာရှာထွက်လေ့ ရှိကြပြီး နံနက် ၅:၀၀ နာရီ မှ ၅:၃၀ နာရီ အချိန်တွင်ယင်း ရွှေမြယာ ကွန်ဒို မူရင်းအသိုက်သို့ပြန်လည် ဝင်ရောက်ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။ […]
ကြောကျကပျ ၁ ခါဆေးရငျ ၄ သောငျး ၅ သောငျး ကုနျတယျလေ …အဲ့ဒီလိုမကုနျအောငျ ကြောကျကပျကို ဒီလို အားဖွညျ့ပါနျော
(ကျောက်​ကပ်​အားနည်းခြင်း၊​ကျောက်​ကပ်​လုပ်​​ဆောင်​ချက်​ကျခြင်း၊​​ကျေက်​ကပ်​​ဆေး​နေရခြင်း​၊ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီးခြင်း​တွေအတွက်​သဘာဝကြီး၏ပြုပြင်​ဖန်​တီး​ပေးမှု) မိတ်​​ဆွေတစ်​​ယောက်​ ​ကျောက်​ကပ်​​ဆေး​နေရလို့ ​ကျောက်​ကပ်​​ဆေးတဲ့ဌာန တစ်​ခုကိုသွားကြည့်​ပါတယ်​ အဲဒီမှာအံ့သြရတာတစ်​ခုက ​ကျောက်​ကပ်​လာ​ဆေး​နေကြရတဲ့သူ​တွေထဲမှာ အသက်​ကြီးသူ​တွေအပြင်​ လူငယ်​​လေး​တွေပါ ​ကျောက်​ကပ်​လာ​ဆေး​နေကြရတာကို ​တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ လူငယ်​​တွေဟာ​ကျောပိုးအိ်​​ပ်​လေး​တွေနဲ့ ​ကျောင်းသားအရွယ်​​တွေပါ။​ကျောက်​ကပ်​လာ ​ဆေးပြီး​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါးပြဲပန်​ထွက်​သွားကြတယ်​။ အဲဒါ​နေ့စဉ်​ပါပဲတဲ့။ အဲ့လိုသာခဏခဏ​ဆေး​နေရရင်​မလွယ်​ဘူး။ ​ကျောက်​ကပ်​တစ်​ခါ​ဆေးရင်​ ​လေးငါး​သောင်းကုန်​တယ်​​လေ။တစ်သက်လုံးပဲဆေးနေရတော့မှာလား။ ဒီက​လေး​တွေကိုကြည့်​ပြီး​တော့ ကျ​နော်​စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​မိပါတယ်​။ တရုတ်​နို့မှုန့်​လိုအဆိပ်​​တွေ​သောက်​ပြီး ကြီးလာကြရတဲ့က​လေး​တွေ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​များ​နေပြီလဲ။ ယ​နေ့​ခေတ်​ကမ္ဘာကြီးမှာကျ​နော်​တို့ စား​သောက်​​နေရတဲ့အစားအ​သောက်​​တွေထဲမှာ ​ကျောက်​ကပ်​ကိုထိခိုက်​​စေတဲ့ အဆိပ်​အ​တောက်​​တွေအများကြီးပါ​နေတဲ့ အတွက်​လူကြီးလူငယ်​ မ​ရွေး ​ကျောက်​ကပ်​​တွေထိခိုက်​​နေကြရပါပြီ။ အရင်​က​တော့​ကျောက်​ကပ်​ကို ဒုက္ခ​ပေးမယ့်​​ကျောက်​​တွေကို ​ကျောက်​ဖယုံသီးနဲ့ဖယ်​ရှား​ပေးတဲ့အ​ကြောင်း​တွေကို ပဲဦးစား​ပေးတင်​ပြခဲ့ပါတယ်​။ အခုက​တော့​ကျောက်​ကပ်​လုံးဝခံနိုင်​ရည်​ရှိ​အောင် ​​ကျောက်​ကပ်​ဆဲလ်​အသစ်​​တွေတည် ​​ဆောက်​ပြီးပြုပြင်​တဲ့နည်းလမ်းတစ်​ခုကို အမြန်​​ပေးမှဖြစ်​​တော့မယ်​လို့ ယူဆပြီးအဲဒီအ​ကြောင်းကို မျှ​ဝေချင်​ပါတယ်​။ ​ကျောက်​ကပ်​ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်​မှာ အလွန်​အ​ရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတစ်​ခုပါ။ ​သွေးထဲကအဆိပ်​​တွေကိုဖယ်​ထုတ်​ပြီး ဆီးလမ်း​ကြောင်းက​နေစွန့်​ပစ်​တဲ့အလုပ်​ကို လုပ်​​ပေးပါတယ်​။အဆိပ်​​တွေများလာရင်​​တော့​ကျောက်​ကပ်​လည်း ခံနိုင်​ရည်​မရှိ​တော့ဘူး။ မနိုင်​​တော့အရှုံး​ပေးရ​တော့တာ​ပေါ့။ အဲဒီမှာ​ကျောက်​ကပ်​ကဆဲလ်​​တွေစတင်​ပြီး ပျက်​စီး​တော့တာပါပဲ။ ​ နောက်​ဆုံးလုပ်​​ဆောင်​ချက်​​တွေရပ်​ဆိုင်းပြီဆိုရင်​​တော့​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီးသွားပါပြီ။အဲဒီလိုပျက်​စီးခြင်းမျိုးအထိမဖြစ်​ရ​အောင်​အတွက်​ဘာလုပ်​ရမလဲ။​လေမုန်​တိုင်းဒဏ်​ကိုခံနိုင်​​အောင်​ခိုင်​ခံ့တဲ့တိုက်​အိမ်​​ကောင်း​ကောင်း​ဆောက်​ထားဖို့လိုသလိုအဆိပ်​​တွေရဲ့ဒဏ်​ကိုခံနိုင်​​အောင်​မိမိရဲ့​ကျောက်​ကပ်​ကိုသံမဏိလိုတည်​​ဆောက်​ထားဖို့ပါပဲ။​ ကျောက်​ကပ်​ဆိုတာအ​သွေးအသားတစ်​ခုပြဲဖစ်​တယ်​။Cell​တွေစု​ပေါင်းပြီးတည်​​ဆောက်​ထားတာဖြစ်​တယ်​။အဲဒီCell​တွေရရှိတဲ့Sourceကဘာလဲ။အ​သွေးအသား​တွေအားလုံးရဲ့sourceကအာဟာရကလာတယ်​။ဒါ​ကြောင့်​​ကျောက်​ကပ်​cell​တွေကိုတည်​​ဆောက်​​ပေးမယ့့်​အာဟာရကိုရှာရမယ်​။ လူ့န္ဓာကိုယ်​မှာရှိတဲ့အင်္ဂါ​တွေအားလုံးအတွက်​အတွက်​ဖြည့်​စွက်​​ပေးမယ့်​အာဟာရကိုသဘာဝကြီးက​ပုံစံတူ​ပေးထားပြီးဖြစ်​ပါတယ်​။အဲဒါကိုလူ​တွေကနားမလည်​ကြ​တော့မသိသူ​ကျော်​သွားသိသူ​ဖော်​စားအဆင့်​မှာပဲရှိ​နေရတယ်​။​ကျောက်​ကပ်​အတွက်​အားဖြည့်​​ပေးမယ့်​အစာက​တော့မြန်​မာ​တွေနဲ့မစိမ်းတဲ့ပဲကတ္တီပါ(kidney bean)ပဲဖြစ်​ပါတယ်​ […]
အိပ်မရေ​အာင်​ဆိုး​နေတဲ့​ချောင်းချက်​ခြင်းလစ်​သွားမယ်​ ကြက်သွန်နီနဲ့ ချောင်းဆိုး ပျောက်ခြင်းကို ကုသတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. အသုံးပြုပုံလေးကတော့ကြက်သွန်နီခြောက်လုံး လောက်ကို ပါးပါးလေး လှီးလိုက်ပါ….. ၎င်းကို ပျားရည်ခွက်ဝက်နှင့် ရောစပ်ကာ ဆူပွက် နေတဲ့ အိုးအပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ပါ ဒယ်အိုးဖြင့် ထည့်လိုက်ပါ…… အဖုံးအုပ်ပြီး ရေနွေး ငွေ့နှင့် ၂ နာရီကြာ အပူ ပေးလိုက်ပါ…… အရည်များကို စစ်လိုက်ပြီး လုံခြုံစေမယ့် ဗူးနဲ့ထည့်ထား လိုက်ပါ….. ထိုအရည်များကို ၂ နာရီ ၃ နာရီကြား တစ်ချိန် သောက်ပေးပါက ရောဂါပျောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်…..။​ဆေးကြိတ်​တဲ့​ဇော်​ဂျီ unicode version အိပျမရေ​အာငျ​ဆိုး​နတေဲ့​ခြောငျးခကျြ​ခွငျးလဈ​သှားမယျ​ ကွကျသှနျနီနဲ့ ခြောငျးဆိုး ပြောကျခွငျးကို ကုသတာပဲ ဖွဈပါတယျ…. အသုံးပွုပုံလေးကတော့ကွကျသှနျနီခွောကျလုံး လောကျကို ပါးပါးလေး လှီးလိုကျပါ…. ၎င်းငျးကို ပြားရညျခှကျဝကျနှငျ့ ရောစပျကာ […]
မနကျ Jogging မှာ ကြောငျးသှားရငျး လမျးမှာတှတေဲ့ ဘုနျးဘုနျးကို ပါလာတဲ့ထမငျးထုပျလေးတှေ လှူနတေဲ့ ကြောငျးသူလေး
ကျောင်းသွားရင်း လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ဘုန်းဘုန်းကို ပါလာတဲ့ ထမင်းထုပ်လေးတွေ လှူနေတဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေ မနက် Jogging မှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေးပါ… ဒီသမီးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တွေ့နေတာကြပါပြီ….. အိမ်ကသူတို့အတွက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ထမင်းဘူး ကို လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ကိုယ်တော်ကိုဆွမ်းကပ်လိုက်တာပါ…. သာဓု သာဓု သာဓု ပါ သမီးငယ်တို့…..ဦးဇငိ်းကနိုင်ငံခြားသားပါ….. ကာယကံရှင် ဦးပဉ္ဇင်း နှင့် သမီးငယ်နှစ်ယောက်ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံဘဲ ဓာတ်ပုံ သုံးမိခြင်းအားခွင့်ပြုပေးပါ…..။ credit -realthadin unicode ကြောငျးသှားရငျး လမျးမှာတှတေဲ့ ဘုနျးဘုနျးကို ပါလာတဲ့ ထမငျးထုပျလေးတှေ လှူနတေဲ့ ကြောငျးသူလေးတှေ မနကျ Jogging မှာ တှမွေ့ငျခဲ့ရတဲ့ ကွညျနူးစရာ မွငျကှငျးလေးပါ… ဒီသမီးနှဈယောကျကိုတှတှေ့နေ့တောကွပါပွီ….. အိမျကသူတို့အတှကျထညျ့ပေးလိုကျတဲ့ ထမငျးဘူး ကို လမျးမှာတှတေဲ့ ကိုယျတျောကိုဆှမျးကပျလိုကျတာပါ…. သာဓု […]